နာတယ်ဟ ! တစ်စက္ကန့် သားရေပင် ၁၄ကွင်း ပစ်နိုင်မယ့် စက်သေနတ် – Trend.com.mm
နာတယ်ဟ ! တစ်စက္ကန့် သားရေပင် ၁၄ကွင်း ပစ်နိုင်မယ့် စက်သေနတ်
သေနတ်ပြောင်းကတဆင့် တစ်စက္ကန့်အတွင်း သားရေပင် ၁၄ကွင်း ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ စက်သေနတ် ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ရေးဆွဲတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ သားရေပင် ၆၇၂ကွင်း တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး ၂၆ပေ (၈မီတာ) အကွာမှာရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ကို တစ်စက္ကန့် ၁၄ချက်နှုန်းနဲ့ မြန်နှုန်းမြင့်ပစ်ခတ်နိုင်မှာပါ။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဟာ ၁၈နှစ်အရွယ် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ခေတ်အစောပိုင်း မြန်နှုန်းမြင့် လက်နက်တွေကို ရူးသွပ်သူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဒီဇိုင်းရေးဆွဲလိုက်တဲ့ သားရေပင် စက်သေနတ်ကို ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ကန်ဒေါ်လာ (၁၄၀) ၀န်းကျင်နဲ့ပဲ ဖြန့်ချိရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး အရောင် ၃မျိုးနဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
Butcher Babies အဖွဲ့ရဲ့ I Smell A Massacre ဗီဒီယို
2014 မှာ ဆံပင်အတို ညှပ်ချင်စိတ်ရှိနေရင်